Kooxaha Man City, Chelsea, Arsenal Oo Guulo Gaadhay Iyo Liverpool Oo La Garaacay. | Berberanews.com
Kooxaha Man City, Chelsea, Arsenal Oo Guulo Gaadhay Iyo Liverpool Oo La Garaacay.
September 10, 2011 | Published by: Maax
(Berberanews Sports):- Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa dhaliyay seddexleydiisii ugu horeysay ee Manchester City ka dib markii ay 3-0 ku garaaceen kooxda Wigan Athletic oo marti ku aheyd garoonka Etihad Stadium.
Ciyaaryahanka reer Argentina ayaa shabaqa ku hubsaday seddex gool daqiiqadihii 13, 63, iyo 69aad, waxaana uu ka dhigay goolashiisa 6 gool afar kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa cusub, iyadoo City ay horyaalka si fiican ugu bilaabatay.
Inkastoo Aguero uu goolasha dhaliyay hadana xiddiga ciyaarta waxa uu ahaa David Silva, kaasoo farsamadiisa iyo aragtidiisa qotada dheer ka dhigtay muran la’aan ciyaaryahanka haatan ugu fiican Premier League qaab ciyaareed ahaan.
Silva waxa uu caawiye ka ahaa labo gool, waxaana uu ahaa wadnaha weerarka kooxda Manchester City ciyaarta oo dhan.
Barta madow ee loo yeeli karo City ayaa timid markii uu rigoore ka qasaariyay kabtankoodii hore Carlos Tevez.
Edin Dzeko oo gooldhalintiisa ay cajiib aheyd islamarkaana noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 6 gool dhaliya seddexda kulan ee ugu horeysay Premeir League ayaaba iska arkay kursiga keydka iyadoo Tevez uu ku bilowday.
Aguero ayaa noqday ciyaaryahankii 7aad ee Man City u dhaliya Hat trick.
Dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan gaadhay ka dib markii ay 1-0 kaga badisay kooxda horyaalka ku cusub ee Swansea City oo marti ku aheyd garoonka Gunners ee Emirates.
Andrei Arshavin ayaa dhaliyay gool fursad ahaa shan daqiiqo ka hor inta aanay dhamaan qeybtii hore ee ciyaarta ka dib qalad uu sameeyay goolhayaha kooxda Swansea.
Arsenal ayaa ka fogaatay seddexda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya ka dib markii ay heleen guushoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka, waxaana haatan ay soo gashay kaalinta 11aad.
Arsenal ayaa tijaabisay ciyaartoyda cusub ee dhawaan ay la soo wareegtay, waxaana guushaan ay u tahay niyad dhis aad u weyn marka loo eego xaaladii xumeyd ee ay ku jireen bilihii u danbeeyay.
Dhinaca kale gool uu dhaliyay Jonathan Walters ayaa keentay inay Stoke City 1-0 ku dardarto kooxda Liverpool, kuwasoo guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka Premeir League dhadhamiyay.
Walters ayaa u saxeexay Stoke City rigoore daqiiqadii 21aad ee ciyaarta, ka dib markii uu rigooradaas ku galay ciyaaryahan Jamie Carragher. Walter ayaa rigooradaas tuuray islamarkaana gool u sarifay.
Inkastoo qeybtii danbe ee ciyaarta ay Liverpool ciyaarta maamuleysay hadana waa ay u suurogeli weyday inay gool dhaliyaan. Jordan Henderson ayaa goolkiisi labaad Liverpool u dhalin karay, lakiin fursadaasi ayaa noqotay mid qasaartay.
Sidoo kale Luis Saurez ayaa fursad fiican helay dhamaadkii ciyaarta lakiin ma aysan noqon goolkii ay doonayeen Reds.
Kooxda Chelsea ayaa guusheedii ugu horeysay ee iyadoo marti ah gaadhay ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Sunderland ciyaar ka dhacday Stadium of Light.
Chelsea ayaa goolka furtay daqiiqadii 17aad ee ciyaarta, iyadoo uu dhaliyay kabtanka kooxda John Terry.
Daniel Sturridge ayaana u labeeyay kooxda Blues, isagoo qaab fiican cirib ugu dhaliyay, waxaana uu la soo laabtay qaab ciyaareed fiican.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Sunderland Ji Dong ayaa dhamaadkii ciyaarta gool u dhaliyay lakiin goolkaasi wax macno ah ma aanuu soo kordhin.
Ciyaaryahan Fernando Torres oo todobaadkan qaab ciyaareedkiisa Chelsea iyo Spain la hadal haayay ayaa kursiga keydka ku bilowday iyadoo tababare Andre Villas-Boas uu ka doorbiday Anelka oo garbaha ay ka daadihinayeen Daniel Sturridge iyo Juan Mata.
Ciyaaryahan Raul Meireles ayaa isna kulankiisii ugu horeeyay ee Chelsea ku bilowday isagoo boos ka helay khadka dhexe.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Wolves, ciyaaryahan Adebayor oo kulankiisi ugu horeeyay u ciyaarayay Spurs ayaa goolka hore furay, halka Defeo uu u labeeyay kooxda London ka dhisan.
Aston Villa iyo Everton ayaa iyagana ciyaar xiiso badan ay ku dhexmartay Liverpool, waxaana ay ciyaartaasi ku dhamaatay barbaro 2-2 ah.